ओनसरी घर्ती पहिलो महिला सभामुख (कुराकानी सहित) – Peacepokhara.com
काठमाण्डौ ३० असोज । व्यवस्थापिका–संसद्ले सभामुख र उपसभामुख निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । शुक्रबार दुई चरणमा बसेको संसद् बैठकले एमाओवादी सांसद ओनसरी घर्तीलाई सभामुख र राप्रपा नेपालका सांसद गंगाप्रसाद यादवलाई उपसभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो ।
घर्ती पहिलो महिला सभामुख हुन् । नेमकिपाबाट सभामुख र उपसभामुखका लागि अघि सारिएका अनुराधा थापामगर र डिल्लीप्रसाद काफ्ले दुवैले अन्तिम चरणमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि घर्ती र यादव निर्विरोध भएका हुन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा विभाजित भएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतका दलले पनि सत्तारुढ गठबन्धनले अघि सारेका सभामुख र उपसभामुखका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेका थिए । नेमकिपाले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि ज्येष्ठताका आधारमा सभामुखको भूमिकामा रहेका लक्ष्मण राजवंशीले घर्तीलाई सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए ।
सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो कस्तो महसुस भएको छ ?
मैले यो जितलाई नेपाली जनताको जितका रूपमा लिएकी छु । नेपालको संविधानले राजतन्त्रको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको छ । यसलाई संस्थागत गर्ने दायित्व संसद्को हो । राष्ट्रले सुम्पेको यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न मेरोतर्फबाट सक्दो भूमिका खेल्नेछु । देश र जनताको पक्षमा थप जिम्मेवारी बढेको महसुस गरेकी छु ।
फरक पृष्ठभूमि र भूमिकाबाट सभामुखको जिम्मेवारीमा पुग्नुभयो । विगत र वर्तमानलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
म समाजको सेवा गर्छु भनेर राजनीतिमा हामफालेको व्यक्ति हो । मेरा आफ्ना इच्छा, आकांक्षाभन्दा देशको चाहनाअनुसार हिँड्ने प्रतिबद्धता गरेकी छु । हिजो जनयुद्धबाट जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यसैले युद्धमा गएर आफ्नो भूमिका निभाएको हो । अहिले देश नै फरक बाटोमा हिँडिरहेको छ । देशले हामी सबैको फरक–फरक भूमिकाको माग गरेको छ । त्यसैअनुसार म निर्विरोध सभामुख निर्वाचित भएकी हुँ । यो समयको आवश्यकताले दिएको भूमिकामा प्रखर उत्रने मेरो पूरै प्रयास हुनेछ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण काम संसद्ले गर्नुपर्नेछ, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । कसरी चुनौतीको सामना गर्नुहुन्छ ?
मैले धेरै चुनौती देखेकी छु । त्यसभित्र सुवर्ण अवसर पनि लुकेको महसुस भएको छ । राजनीतिक दलहरूबीचको एकता र जनताबीचको एकता नै देशको समृद्धिको जग हो । संवादबाट आन्दोलनरत दलका एजेन्डामा सहमति गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । आगामी दिनमा यस विषयमा विशेषगरी राजनीतिक दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ । संवादको सुरुवात भएको पनि छ । यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । संविधानमा रहेको व्यवस्थाअनुसार ऐन, कानुन व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि संसद्ले खेल्नुपर्ने भूमिकामा संसद् चुक्ने छैन । कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । कांग्रेस पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी र संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल हो । उसले संसद्मा खेल्ने भूमिका, आफ्नो जिम्मा र कर्तव्य बुझेको छ । जनताको हितमा काम गर्नेछ भन्नेमा विश्वास छ ।
केही दल आन्दोलनमा छन्, उनीहरूको सहभागिताविना संविधान कार्यान्वयन कसरी सम्भव होला ?
सबै समस्याको समाधान संवाद नै हो । उहाँहरूसँग पनि संवादकै माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्छ । संसद्भन्दा बाहिर रहेका दलहरू र नेतृत्वलाई पनि वार्ताबाट समाधानमा जान म आग्रह गर्दछु । उहाँहरूले पनि जनताको अधिकारकै कुरा उठाउनुभएको हो । सबै दलहरू मिलेर आगामी चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । आधारभूत रूपमा केही प्रयास भएका छन् । दलहरूबीच सहमति पनि भएको छ । वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने पहलकदमी लिन सम्बन्धित पक्ष थप गम्भीर हुनुपर्नेछ । – स्रोत : नयाँपत्रिका
peacepokhara 18 Jul 2015